အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့်ခဲအိုဖြစ် သူကို…. | 9han News
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့်ခဲအိုဖြစ် သူကို….
Admin | April 29, 2020 | Local News | No Comments
ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက်မြို့ ဇင်းကျိုက်ရပ်ကွက် နယ်မြေ၈ ၌နေ သူ မ*****အသက် ၁၆ နှစ်ခန့် သည် ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိနေပြီဟု ဆားဖိုစုရပ် ကွက် မှ ရပ်ဆွေရပ်မျိုး ဒေါ်မပျို က သိရှိ သွားခဲ့ရာမှ ခဲအိုဖြစ်သူက ကျုးလွန်သော မု- ဒိ မ်:- မှု တိုင်တန်းမှု ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်
ဇင်းကျိုက်ရပ်ကွက် နေတွင်မောင်လေး ၃၂နှစ် (ဘ)ဦးအုန်းတင် နှင့် မမိယုတို့သည် အိမ်ထောင် ကျပြီး သားသမီး၃ယောက်ရှိခဲ့ကြောင်း မမိယု ၏ ညီမများဖြစ်သော မ*****နှင့်မ****တို့ မှာ လည်း သူတို့နှင့်အတူ လိုက်ပါနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း
ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့က မ****မှာ ဆားဖိုစု ရပ်ကွက် ရှိမိဘများထံအလည်သွားရာမှ ၎င်း၌ကိုယ် ဝန်ရှိ နေသည် ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသိရှိပြီး မမိယုကိုပြော ပြခဲ့ကြောင်း တရားခံ မောင်လေးသည် မမိယု၏ အောက်မွေးချင်းဖြစ်သည့် အသက်၂၂နှစ် ခန့်အ ရွယ် ညီမ ဖြစ်သူ မ****အားလည်းယခုကဲ့သို့ ကျုး လွန် ထားမှုများရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်
READ ရက္စက္လိုက္တာ ေရာဂါဆိုးျကီးေရ … ဆံုးပါးသြားတဲ့ မိဘအနားေလးကို သြားျပီ ငိုခြင့္ေတာင္မေပးဘူ မငိုးပါနဲ့ ခေလးရယ္လို့ ေထြးေပြ့ျပီ အားေပးလို့မရဘူး ရက္စက္လိုက္တာ😢😢
ယခုအမှုအား ဧပြီ၂၈ရက်နေ့တွင် ပေါင်မြို့မရဲ စခန်းသို့ အမှုလာတိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ပေါင်မြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရဲမှုးဝင်းနိုင်ထွန်းကိုယ်တိုင်အခင်း ဖြစ်ရပ်သို့သွားရောက်ပြီးဇင်းကျိုက်ရဲကင်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ ရာအိမ်မှုး ဆယ်အိမ်မှုးများ ။ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နှင့် နယ်မြေခံ နယ်ခြားစောင့်အဖွဲ့များစုဖွဲ့ကာ တရားခံဖမ်းဆီး ရမိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်
တရားခံသည်ပန်းကုန်းကျေးရွာ ဘက်သို့တိမ်း ရှောင်သွားသည်ဟုသတင်းအစရှိခဲ့ပြီး စုဖွဲ့အင်အားများဖြင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ပန်းကုန်းကျေးရွာ အောင်ဇေယျ လမ်းဆွမ်း လောင်း တဲ၌ ညနေ ၅နာရီခွဲအချိန်တွင် တရားခံ အားလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်
ညီအမ ၃ယောက်လုံးနှင့်ပတ်သက်သော မု- ဒိ မ်: မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေရာ ထူးခြားမှုရှိသော အမှု လည်းဖြစ်နေသည် ဇင်းကျိုက်မြို့မှ အခြားသက်ငယ်မု- ဒိ မ်: မှုတရား ခံတစ်ဦးဖြစ်သည့် သန့်ဇင်ဆိုသူမှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည်
READ မလေးရှားမှပြန်လာသူ ၃၉၁ ဦးတွင် ၅ ဦးရောဂါပိုးတွေ့ရှိ၊ ကျန်လူများ စစ်ဆေးဆဲ
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕ ဇင္းက်ိဳက္ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ၈ ၌ေန သူ မ*****အသက္ ၁၆ ႏွစ္ခန့္ သည္ ကိုယ္ဝန္တစ္လရွိေနၿပီဟု ဆားဖိုစုရပ္ ကြက္ မွ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳး ေဒၚမပ်ိဳ က သိရွိ သြားခဲ့ရာမွ ခဲအိုျဖစ္သူက က်ဳးလြန္ေသာ မု- ဒိ မ္:- မႈ တိုင္တန္းမႈ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႕ကျဖစ္ပြားခဲ့သည္
ဇင္းက်ိဳက္ရပ္ကြက္ ေနတြင္ ေမာင္ေလး ၃၂ႏွစ္ (ဘ)ဦးအုန္းတင္ ႏွင့္ မမိယုတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီး သားသမီး၃ေယာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မမိယု ၏ ညီမမ်ားျဖစ္ေသာ မ*****ႏွင့္မ****တို႔ မွာ လည္း သူတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႕က မ****မွာ ဆားဖိုစု ရပ္ကြက္ ရွိမိဘမ်ားထံအလည္သြားရာမွ ၎၌ကိုယ္ ဝန္ရွိ ေနသည္ ကိုပတ္ဝန္းက်င္ကသိရွိၿပီး မမိယုကိုေျပာ ျပခဲ့ေၾကာင္း တရားခံ ေမာင္ေလးသည္ မမိယု၏ ေအာက္ေမြးခ်င္းျဖစ္သည့္ အသက္၂၂ႏွစ္ ခန့္အ ႐ြယ္ ညီမ ျဖစ္သူ မ****အားလည္းယခုကဲ့သို႔ က်ဳး လြန္ ထားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္
ယခုအမႈအား ဧၿပီ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕မရဲ စခန္းသို႔ အမႈလာတိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရဲမႈးဝင္းနိုင္ထြန္းကိုယ္တိုင္အခင္း ျဖစ္ရပ္သို႔သြားေရာက္ၿပီးဇင္းက်ိဳက္ရဲကင္းမွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ရာအိမ္မႈး ဆယ္အိမ္မႈးမ်ား ။ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္ေျမခံ နယ္ျခားေစာင့္အဖြဲ႕မ်ားစုဖြဲ႕ကာ တရားခံဖမ္းဆီး ရမိေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္
တရားခံသည္ပန္းကုန္းေက်း႐ြာ ဘက္သို႔တိမ္း ေရွာင္သြားသည္ဟုသတင္းအစရွိခဲ့ၿပီး စုဖြဲ႕အင္အားမ်ားျဖင့္လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ပန္းကုန္းေက်း႐ြာ ေအာင္ေဇယ် လမ္းဆြမ္း ေလာင္း တဲ၌ ညေန ၅နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ တရားခံ အားလက္ရဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္
ညီအမ ၃ေယာက္လုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မု- ဒိ မ္: မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနရာ ထူးျခားမႈရွိေသာ အမႈ လည္းျဖစ္ေနသည္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕မွ အျခားသက္ငယ္မု- ဒိ မ္: မႈတရား ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သန့္ဇင္ဆိုသူမွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္သည္
အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး နဲ့ ဒေးဗစ်လား ကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာသရ၀ဏ် (ပြည်)
လူနာအမှတ် ၁၈၂ နှင့် မလေးရှားမှ လေယာဉ်အတူစီးပြန်လာခဲ့သူ ၁၂၀ ခန့်ရှိ
ဟားခါးမှ ကိုဗစ်လူနာအမှတ်-၁၅၀ သည် ကလေးမြို့ရှိ သူငယ်ချင်းအိမ်တွင် (၁၀) ရက် တည်းခိုသွားခဲ့